Aabbihii Nuclearka Pakistan oo geeriyooday
Home WARARKA Aabbihii Nuclearka Pakistan oo geeriyooday
Khattak ayaa qoraalkiisa ku yidhi: “Pakistan mar walba way xushmeyn doontaa shaqada uu Dr. Khan u qabtay dalka. Waddanka mar walba abaal buu Khan uga hayaa xoojinta awooddeeda difaaca.
Qoraalkiisa, ayuu Imran Khan ku yidhi: “Geerida Dr Abdul Qadeer Khan waa mid aad murugo u leh. Dadka aad bey u jeclaayeen sababo la xiriira doorka muhiimka ah ee uu ku lahaa quwadda nukliyeerka Pakistan. Tan waxay Pakistan ka difaacday dalka deriska la ah ee nukliyeerka ku hubeysan. Wuxuu dadka Pakistan u ahaa dhiirrigeliye.
Qoraalkiisa, ayuu Sharif ku yiri, “Warka Fakhr-e-Pakistan Dr Abdul Qadeer Khan oo lagu xiray qalabka hawada Oksojiinka waa mid aad murugo u leh. Waxaan bulshada ka codsanayaa inay u duceeyaan Dr Khan.”@Bbc Somali
Previous articleSomaliland: Dowladda oo 14 cisho ku saaraysa dadka ajaanibka ah ee Ceerigaabo ku nool
Next articleKoonfur Afrika: Ganacsade Somaliyeed oo la dilay